ALIEXPRESS အပေါ်အငြင်းပွားမှုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို - ALIEXPRESS - 2019
AliExpress site ပေါ်တွင်တစ်ဦးအငြင်းပွားဖွင့်လှစ်
Apple ကထုတ်ကုန်များ၏အတော်များများသည်အသုံးပြုသူများ iTunes ကို mediakombayn အားကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်သည့်ထိုကဲ့သို့သော iTools အဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ကြ၏။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ iTools iPhone ကိုမမြင်ရပါဘူးသောအခါအများ၏ပြဿနာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
iTools - သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Apple ရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူလုပ်ကိုင်ဖို့တစ်လူကြိုက်များဆော့ဖ်ဝဲ။ ဒီပရိုဂရမ်ဂီတကူးယူ၏ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်ကိုထောက်ပံ့ပေး, ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယို cache ကိုတွေ, cookies, နှင့်အခြားအပျက်အစီးများနှင့်ထို့ထက် ပို. ဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုပိုမိုတိုးတက်စေရန်, device ကိုမှသူတို့ကိုလွှဲပြောင်းချက်ချင်းဖုန်းမြည်သံဖန်တီး, စမတ်ဖုန်းမျက်နှာပြင် (တက်ဘလက်) နဲ့ဗီဒီယိုကမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။
ကံမကောင်းစွာပဲ program ကိုသုံးစွဲဖို့ဆန္ဒအမြဲအောင်မြင်မည်မဟုတ်ပါ - သင့်ပန်းသီး device ကိုရိုးရှင်းစွာ program ကတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ပြဿနာများ၏အမြစ်အကြောင်းတရားများကိုကြည့်။
အကြောင်းမရှိ 1: ကွန်ပျူတာကို iTunes တစ်ခုအဟောင်း version ကိုအပြေးနေသည်သို့မဟုတ် program ကို Non-တည်ရှိမ
iTools မှအစီအစဉ်ကိုမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ရန်ပျက်ကွက်, သင်ကကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖို့လိုတယ်, iTunes ကိုလည်း iTunes ကို program ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်ရှိသည်ဖို့သေချာပေါက်မဟုတ်ထူထောင်နှင့်ပြီ။
ယင်းကို iTunes မှ updates များကိုစစ်ဆေးသည်ပရိုဂရမ်ကို run, ခလုတ်ကို box ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာနှိပ်ပါ "အကူအညီ" ပွင့်လင်းအပိုင်း "အပ်ဒိတ်များ".
အဆိုပါစနစ်အ updates တွေကိုစစ်ဆေးနေစတင်ပါလိမ့်မယ်။ အသစ်က updates များကိုတွေ့ရှိလျှင်သင် iTunes ကိုများအတွက်သူတို့က install သတိပေးခံရလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာနှင့်သင်, iTunes ကို install လုပ်ထားမထားဘူးဆိုရင်, ကမပါဘဲအဖြစ်, သင်က download လုပ်ပါနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ၏တရားဝင် site ကိုဤလင့်ခ်ကနေတဆင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install သေချာအောင်, iTools အလုပ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။
အကြောင်းပြချက် 2: iTools ၏အဟောင်းဗားရှင်း
iTools iTunes ကိုနှင့် တွဲဖက်. အလုပ်လုပ်တယ်ကတည်းက iTools အစီအစဉ်ကိုလည်းနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း update လုပ်ရပါမည်။
pre-အစီအစဉ်ကိုကွန်ပျူတာဖယ်ရှားခြင်း, လုံးဝ iTools reinstall လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ, အဲဒီနောက်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ၏တရားဝင် site မှနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။
ဒီလိုလုပ်ဖို့မီနူးဖွင့်လှစ် "Control Panel ထဲက"မြင်ကွင်းကို mode ကို Set "Small Icons"ပြီးတော့အပိုင်းကိုဖွင့ ်. "အစီအစဉ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ".
installed အစီအစဉ်များ, iTools များ၏စာရင်းအတွက်လာမယ့် window ထဲတွင်ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်ဖြတ်လမ်း menu ကနေ, select လုပ်ပါ "ကိုဖျက်"။ အဆိုပါအစီအစဉ်၏ဖယ်ရှားရေး complete ။
iTools ရဲ့ဖယ်ရှားရေးအသိအမှတ်ပြုသောအခါ, သင်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ၏တရားဝင် site မှနောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ဒီ link ကိုသွားပါနှင့်ပရိုဂရမ်ကို download လုပ်ပါ။
ဒေါင်းဖြန့်ဖြူးအထုပ်ကို run ခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် installation ပရိုဂရမ်လိုက်နာပါ။
အကြောင်းမရှိ 3: System ကိုပျက်ကွက်
ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် iPhone ရဲ့မမှန်ကန်ကြောင်းစစ်ဆင်ရေး၏ပြဿနာကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်, ထို့နောက်ထိုကိရိယာများ၏တစ်ဦးချင်းစီကို restart ချလိုက်ပါ။
အကြောင်းပြချက် 4: unoriginal သို့မဟုတ်ပျက်စီး cable ကို
အတော်များများက Apple ထုတ်ကုန်များကိုမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောကြိုးတွေအဖြစ် Third-party ဆက်စပ်ပစ္စည်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်တွန့်ဆုတ်နေကြသည်။
သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာအဆင်သင့်လုပ် cable ကိုချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက, ငါတို့သည်သင်တို့မူရင်း iPhone ကိုအတူကအစားထိုးရန်နှင့် iTools ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုပြန်လုပ်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
တူညီသောဥပမာ kinks သို့မဟုတ်ဓာတ်တိုးရှိပါတယ်, မူရင်းပျက်စီးကြိုးတွေသက်ဆိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, က cable ကိုအစားထိုးအကြံပြုသည်။
အကြောင်းပြချက် 5: အဆိုပါ device ကိုကွန်ပျူတာမယုံပါဘူး
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုစမတ်ဖုန်းများ၏ data ကို access နိုင်အောင်, သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာရန်သင့် iPhone ကိုချိတ်ဆက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်, သင်ကစကားဝှက်သို့မဟုတ် Touch ကို ID ကို အသုံးပြု. iPhone ကို unlock ဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင်, အရာပြီးနောက် device ကိုမေးခွန်းမေးဖို့ပါလိမ့်မယ်: "ဒီကွန်ပျူတာကိုယုံကြည်စိတ်ချ?" ။ အဖြေဟုတ်ဖြစ်တယ်, iPhone, iTools ပေါ်လာသငျ့သညျ။
အကြောင်းပြချက် 6: set jailbreak
device ကို hacking အများအပြားအသုံးပြုသူများအတွက် - ဤ Apple ကမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌ထည့်သွင်းခံရဖို့မသွားသော features တွေရဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်အတိအကျသင့်ရဲ့ device ကို Jailbreack ၏ကြောင့် iTools အတွက်အသိအမှတ်ပြုမရနိုင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်တစ်ဦးလတ်ဆတ်တဲ့ iTunes ကို backup လုပ်ထားဖန်တီးလုပ်ဆောင်ပါက၎င်း၏မူရင်းအခြေအနေမှ device ကို restore, ပြီးတော့ backup လုပ်ထားရာမှ restore ။ ထိုသို့သောနည်းလမ်း Jailbreack ဖယ်ရှားပေးပေမယ့် device ကိုဖြစ်ကောင်းမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
အကြောင်းမရှိ 7: ယာဉ်မောင်းများ၏ပျက်ကွက်
ယင်းချိတ်ဆက် Apple ကကိရိယာများအတွက်ယာဉ်မောင်း reinstall ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သောပြဿနာ, ဖြေရှင်းဖို့နောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
USB မှတ်-cable ကိုကနေတဆင့်ကွန်ပျူတာရန်သင့် Apple ကကိရိယာကိုချိတ်ဆက်ပါနှင့်, Device Manager window ကိုဖွင့်လှစ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင် menu ကိုသှားဖို့လိုအပျ "Control Panel ထဲက" နှင့် partition တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ "Device Manager".
တိုးချဲ့ "အိတ်ဆောင် devices များ"က "Apple က iPhone ကို" ကိုနှိပ်ပါ, right-click နှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "Update ကိုယာဉ်မောင်း".
ကို Select လုပ်ပါ "ယာဉ်မောင်းဆော့ဖ်ဝဲကွန်ပျူတာရှာရန်".
ကို select လုပ်ပါကအောက်ပါ "သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ယာဉ်မောင်းများ၏စာရင်းကနေကားမောင်းသူကို Select လုပ်ပါ".
button ကို Select လုပ်ပါ "ရှိသည် Disk ကို".
အဆိုပါပြသသည် Windows Explorer ထဲမှာအောက်ပါဖိုင်တွဲ go:
ကို C: Program Files Common Files Apple က မိုဘိုင်း Device ကိုပံ့ပိုး Drivers
သငျသညျနှစျခု display ကိုဖိုင်တွေ "usbaapl" (က Windows 64 bit နဲ့အတှကျ "usbaapl64") ကို select ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပြတင်းပေါက်မှပြန်လာသော "Disk ကို မှစ. Install" အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို" နှင့်ယာဉ်မောင်း installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြည့်စွက်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ iTunes ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောစစ်ဆင်ရေး iTools အစီအစဉ်အတွက်စစ်ဆေးပါ။
စည်းကမ်းအဖြစ်, ထိုအိုင်ဖုန်း iTools အစီအစဉ်တွင်စွမ်းရည်ညံ့ဖျင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုအဓိကအကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့သည်ဤဆောင်းပါးကိုသင်ကူညီပေးခဲ့တယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ပြဿနာသင့်ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းချက်ရှိပါကမှတ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပေးပါ။
ဗီဒီယို Watch: TEST - HAUL - AVIS - ARNAQUE ALIEXPRESS ET SITE CHINOIS :9ASTUCES POUR NE PLUS SE FAIRE AVOIR ! (သြဂုတ်လ 2019).
Hamachi စတင် Self-စမ်းသပ်ပုံပေါ်မပါဘူးဆိုရင်ဘယ်အရာကို
Photoshop မှာတွေက dotted line ကိုရေးဆွဲရန်ကဘယ်လို
Malware Trend Micro နဲ့ဆန့်ကျင်ခြိမ်းခြောက်မှု Toolkit ကိုဖယ်ရှားခြင်း
အများဆုံးတောင်းဆိုမှုများဂိမ်းများကိုဆော့ကစားနိုင်သည့် 10 Laptop,
အီလက်ထရောနစ်စာအုပ်များတဖြည်းဖြည်းစက္ကူနဲ့အစားထိုး, ယခုလူတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တက်ဘလက်များသို့မဟုတ်အခြားစက်ကိရိယာများပေါ်တွင်စာအုပ်တွေ download လုပ်ပါနှင့်ဖတ်ရှုဖို့ကြိုးစားနေသည်။ အီလက်ထရောနစ်စာအုပ်များ (.fb2) ၏စံပုံစံကို Windows စနစ်က software ကိုကမထောက်ပံ့နေသည်။ ဒါပေမဲ့ဒီ format နဲ့ AlRider အကူအညီဖြင့်စနစ်အဘို့အဖတ်လို့ရအောင်ဖြစ်လာသည်။ AlReader - * သင် format နဲ့အတူဖိုင်တွေဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသောဤစာဖတ်သူကို။ ဆက်ဖတ်ရန်
အတု Voice ကို 7.0
https://termotools.com my.termotools.com © AliExpress 2019